Alahady – 09/11/2014 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 09/11/2014 – Toriteny
Post published:15 novembre 2014
Misy zavatra mampiavaka antsika katôlika amin’ny fiangonana rahavavy. Jerentsika indridra inona no ahafantarana fa katôlika rehefa misakafo? Manaofamantarana ny hazo fijaliana. Fa ny katôlika rehefa mivavaka dia fohifohy satria efa noana angamba. Rehefa mivavaka tahaka izao ihany koa isika, inona no ahafantarana hoe fiangonana katôlika io na fiangonana rahavavy ?amin’ny voalohany dia isikaihany no manao ny famantarana ny hazo fijaliana rehefa manomboka. Dia manaraka an’izay, amin’ny maha-fiangonana katôlika, dia fiombonana maneran-tany ary ny fivavahana, nylitorjia, na ny vakiteny ataontsika ao dia mitovy amin’ny fiangonana katôlika rehetra maneran-tany. Izay no ataoko hoe mampiavaka sy tombony ho antsika katôlika.Na ny henontsika eto, na any an-kafa any dia vakiteny iray ihany no vakian’ny fiangonana. Dia mampiavaka antsika katôlika ihany koa ny fisian’ny rafitra mazava. Ny zavatra tiako tenenina farany dia ny eo amin’ny toritenin’ny Pretra: ny an’ny mopera fohifohy ny toriteniny.
Ny tiako hisarihana ny saintsika amin’ity anio ity dia ny maha-fiangonana maneran-tany ny fiangonana katôlika. Androany ny fiangonana dia mankalaza ny nanorenanany fiangonana Basilique tao Frantsa. Rehefa nandalo fotoan-tsarotra ny fiangonana katôlika nandritra ny 300 taona, izany hoe, teo ny fanenjehana isan-karazany dia nisitrika tany an-tranon’olona na tany anaty fasana. Tany ny katôlika, izany hoe ireo zokintsika ara-pinoana no nivavaka, fa tsy sahy niseho masoandro noho ny tahotra izay fanenjehana maro isan-karazany izay.
Rehefa tonga amperora I Constantin, amperoran’IRôma, dia namoaka didy ary nanome alalana ny katôlika ho afaka hiseho masoandro sy tsy tokny hatahotra hampiseho izay antokom-pinoana izay. Mbola kristianina daholo moa ny niantsoana azy tamin’izany fotoana izany fa tsynisy hoe ity katôlika na protestanta. Zava-dehibe ny nanomezan’ny amperora fiangonana ny kristianina tamin’izay fotoana izay satria hita fa io no fiangonana voalohany. Dia mba azontsika eritreretina ve hoe ianao enjehina ka tsy sahy miseho masoandro fa misitrisitrika any anaty toerana mangingina any, na any am-pasana no mivavaka, nefa amin’izao ianao mahazo toerana iray tsara eo akaikin’ny lapa, ivavahana. Dia ataoko hoe misy izay hafaliana izay, tamin’ireo kristianina zokintsika ara-pinoana ireo. Dia izay no manenta na hatramin’izao hoe mankalaz izay fahafanantsika maneho ny finoantsika amin’ny fomba malalaka. Fa tany aloha dia voateritery sy nenjehina isika.
Dia amin’ny alalan’izay no mamadika antsika amin’ny vakitenyfaharoa. Hoy MdPaoly: “Ianareo no fiangonan’Andriamanitra”; satria tamin’ny fotoan’I Md Paoly dia nenjehina ny kristianina ary tsy nanana ilay atao hoe trano fiangonana ahafahan’izy ireo mampiseho sy midera an’Andriamanitra amin’ny fomba malalaka, fa any an-tranon’ny samy kristianina ry zareo no manao fankalazana ny Tenin’Andriamanitra sy mamaky ny mofo.
Dia ataoko hoe zava-dehibe amintsika moa izay satria ahafahantsika midera an’Andriamanitra amin’nyfomba malalaka ao anatin’ity fiangonana ity. Rehefa adikany zava-dehibe dia isika tsirairay avy ireo no mamorona ny fiangonana. Isika tsirairay avy ireo no tempolin’Andriamanitra, satria ao amintsika no itoeran’ny Fanahin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Batemy izay noraisintsika. Manana zo isika, nefa koa manana adidy.
Ny zontsika amin’izao fotoana izao amin’ny maha-kristianina antsika, diany zo ho karakarain’ny fiangonana amin’ny alalan’ny sakramenta. Manan-jo isika handray ny vatsim-panahy na amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra io na amin’ny alalan’ny fampianarna izay ataon’ny pretra na ny katesista na ny tompon’andraikitra maro samy hafa. Ary manan-jo ihany koa isika handray ny sakramenta isan-karazany.
Nefa izay zontsika izay, amin’nymaha-tempolin’Andriamanitra antsika, dia misy adidy aman’andraikitra manaraka an’izay. Fa ny manahirana dia ilay hoe izaho manan-jo ihinan-kanina nefa tsy mahandro sakafo. Izaho manan-jo hatory nefa tsy mety hanamboatra fandriana. Izay ilay tsy mety izay. Fa ny zontsika tsy misaraka amin’ny adidy.
Dia androany moa fetin’ny fianakaviana. Nyfianakaviana no fiangonana satria vetivety eo dia misy sinoda tany Rôma momba ny fianakaviana. Navoitra ombieny ombieny izay maha-fiangonana ny fianakaviana. Ny fianakaviana dia fiangonana velona satria isika tsirairay avy izao dia tempolin’Andriamanitra na koa fiangonan’Andriamanitra. Nefa mitaky adidy izay zavatra izay.
Koa adidintsika eo anivon’ity fiangonana ity dia be dia be. Ianareo no mahatsapa hoe inona no adidiko? Ka manahirana, rehefa mirava ny fiangonana dia lasa isika izay, fa amin’ny atao dia manotania tena hoe inona ny adidiko? Inona no mba azoko atao amin’ity fiangonana ity. Anontanio ny tompon’andraikitra : “misy zavatra azoko atao ve hanampiana ny fiangonantsika?” satria izay no adidy amin’ny maha-kristianina antsika.
Isika katôlika dia somary osaosa amin’io zavatra io, araka ny teniko teo: isika mionona fotsiny amin’ny hoe izao no zo. Ny adidy nefa somary osaosa. Ataoko hoe izay koa dia mapiavaka antsika amin’ny fiangonana rahavavy. Osaosa isika amin’ny fanehoana ny adidintsika.
Koa aza miandry vola aman-karena fotsiny eo. Tsy voatery ho izay ihany no anehoantsika ny adidintsika, fa amin’ny alalan’ny fanomezan-tanana ny tompon’andraikitra eto an-toerana hoe “inona no azoko anampiana mba hampandroso ny fiangonantsika?”.
Izay anie ilay hoe antsika ity. Raha ny tompony indray no mihafahafa dia iza indray no hanao ny zavatra rehetra eto? Tokony ho saro-piaro amin’ny fiangonana isika. Ataoko fa modely ho antsika Jesoa Kristy Tompo. Sahiny mihitsy ny nandroaka ireo olona tao an-tempoly, ireo olona nivarotra; nataon’ny olona fanakalozam-bola tao an-tempoly satria amin’ny maha-tempoly azy izay dia io no toerana ivondronan’ny rehetra. Dia ao daholo na ny mpivarotra na ny mpanao izao rehetra rehetra izao. Hany ka zary hadino fa trano ivavahana anie ity fa tsy fanaovana “bizina” hoy nyfitenintsika amin’izao fotoana izao.
Ka ataoko hoe mampitodika antsika ny andro androany, mankahery antsika ary hampiverina antsika hanontany tena hoe inona ny zo amin’ity fiangonana ity? Aza misalasala mihitsy manantona sy miteny hoe “izaho mopera manana an’iry hianatra katesizy, masera izaho manana an’izao hianatra katesizy”. Mandehana any amin’ny inspektera na ny tompon’andraikitra isan-karazany. Fa ao anatin’izay kosa dia ny hoe inona no adidy ataoko mba ahafahako mamerina amin’nylaoniny mba ho toerana tena ivavahana ity toerana ity. Mba ho toerana manokana ahafanan’y rehetra midera an’Andriamanitra ity trano ity.
Koa ndeha isika hangataka ny fahasoavan’Andriamanitra amin’izao Sorona Masina izao mba ahafahantsika mahatsapa lalandava ary mba hanana an’izay fitiavan’I Kristy ny fiangonana izay. Mba hoe ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko.
Alahady fahaefatra Karemy – 30/03/2014 – Toriteny
Toriteny Alahady 02-04-2017
Alahady – 25/01/2015 – Toriteny